Daawo Sawirradii ugu danbeeyay howlgalkii Pizza House ee la soo gabagabeeyay - Wargane News
Home Somali News Daawo Sawirradii ugu danbeeyay howlgalkii Pizza House ee la soo gabagabeeyay
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysay in ay la wareegaan dhismaha maqaayada Pizza House oo fiidnimadii xalay weerar culus ku qaadeen dabley ka tirsan ururka Al-shabaab.
Sawirro laga soo qaaday maqaayada ayaa muujinaya in xiliga weerarka lagu qaaday maqaayada halkaa ka cunteynayeen dad u badnaa shacab, waxaana daadsan dhamaanba gudaha maqaaxida kuraastii ay dadka ku fadhiyeen raashi fudud iyo cabitaanno kala duwan.
Tirada dhimashda ayaa la sheegay in korartay madaama meydad hore leh laga soo saarayo wali gudaha maqaaxida.
Saacadihii ugu danbeeyayna waxaa laga soo saaray dhismaha meydadka ilaa shan hablo ah oo ka mid ahaa dadkii xalay lagu dilay halkaa.
Ilaa iyo hadda dhab ahaan lama oga tirada rasmiga ah dableyda gudaha u gashay maqaayada, hasse ahaatee waxaa la rumeysan yahay in ay gaarayeen Shan ilaa Lix ruux oo hubeysan, kuwaa oo dhamaantood goobta lagu dilay.
Waa weerarkii ugu xumaa oo waayadii ugu danbeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana mas’uuliyada weerarka sheegtay Al-shabaab oo markii hore war ay soo saareen ku sheegay in ay weerareen Posh Treats .